အဖိုးတန်လှတဲ့ မြန်မာ့ဆေးမြီးတို မှတ်စု လေး…. လိုအပ်တဲ့အချိန် သုံးလို့ရအောင် ရှယ်ပြီး သိမ်းထားစေချင်ပါတယ်… – Nyi Ma Lay
အဖိုးတန်လှတဲ့ မြန်မာ့ဆေးမြီးတို မှတ်စု လေး…. လိုအပ်တဲ့အချိန် သုံးလို့ရအောင် ရှယ်ပြီး သိမ်းထားစေချင်ပါတယ်…
By Nyi Ma LayPosted on September 13, 2021
၁။ သွေးတိုး လို့ သွေးကျ လိုလျှင် သံပုရာသီးတစ်လုံးကို ( ၁၅ ) မိနစ်ခန့်ကြာအော င်ရေစိမ်ပြီး အရည်ညှစ်၍ ကြက်ဥ တစ်လုံး ဖောက်ထည့်ကာေ ရာမွှေသောက် လိုက်ပါ။ သွေးကျဆေး အထူး သောက်စရာမလိုဘဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
၃။ အိပ်မပျော်ခြင်းဖြစ်လျှင် ဒန့်ကျွဲမြစ်ကိုပြုတ်၍ သကြား အနည်းငယ်ထည့်ပြီးသောက်ပါ။ တစ်ခါသောက်လျှင် အကြမ်းပန်းကန်နှင့်တစ်လုံးသောက် ည ၊ နံနက် သောက်ပါ။ အိပ်မပျော်ခြင်းဝေဒနာ သက်သာပျောက်ကင်းစေမည်။
၄။ ပန်းသေပန်းညှိုး ရောဂါ ဖြစ်လျှင် ကစော့ပုပ်မြစ်ကိုအခြောက်လှန်း အမှုန့်ပြုပြီး ပျားရည်နှင့်သောက်ပါ။ရက်မရှည်ဘဲ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
၅။ အမျိုးသမီး များ မီးယပ်ဖြူဆင်းရောဂါဖြစ်လျှင် အဝေရာရွက် ကို မကြာခဏ သုပ်စာထို့အပြင် သိန္ဓော ဆားတစ်ဆ ၊ လက်ပံပွင့်ခြောက်မှုန့်နှစ်ဆတို့ကို ထောပတ်နှင့် ရော၍ ကွမ်းသီးလုံးခန့်နံနက် ၊ ည ခွဲပြီးစားပါ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
( မှတ်ချက် ) မာလကာစေ့ခြောက်မှုန့်ကိုသွားခြေထဲ ထည့်ပေးလျှင်လည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
၈။ လေထိုးလေအောင့်ဖြစ်လျှင် ပုန်းညှက်ပ န်းပွင့်ခြောက် များကို ရေနွေးတွင်ထည့်၍ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း လုပ်သောက်ပါ ၊ သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်ျ
၉။ အော့အန်ခြင်း ဝေဒနာဖြစ်လျှင် ရှောက်မြစ်ကိုသွေး၍ ပျားရည် နှင့် စားပါက သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
၁၀။ ဆီးအိမ် တွင်းမှာ ကျောက်တည်ခြင်းဖြစ်လျှင်သမင်ချိုကိုသွေး၍ သံပုရာရည်နှင့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှစ်ဇွန်းသောက်ပါ။ သုံးခါပင် မသောက်ရဘဲသက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
၁၂။ စားမဝင် အိပ်မပျော်ဖြစ်လျှင် ပျားရည် စစ်စစ်ကို လက်ဖက်ရည် ဇွန်းလေးနဲ့တစ်ဇွန်းကိုညအိပ်ရာဝင်တိုင်း သောက်ပေးပါ။ ခံတွင်းကောင်း၍စားဝင်အိပ်ပျော်စေနိုင်ပါသည်။
၁၃။ မီးယပ်သွေးဆင်းချိန်တွင် မူးဝေတက်ပါသည်။ထို့သို့ဖြစ်လျှင် ရှောက်သီး နှင့် ထန်းလျက်ကိုရောစားလိုက်ပါ။ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
၁၆။ ဆံပင်ကျွတ် လျှင် ပိထောက်ရွက် ကို ထုထောင်း၍ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့် တွဲဖက် လျှော်ပေးပါ။ဆံပင်များလုံးဝမကျွတ်စေပါ။
၁၇။ အမျိုးသမီး များတွင် အဖုအကျိတ်များပေါက်လျှင်လဝန်းဂမုန်းပင် ပဉ္စငါးပါးကို ထုထောင်း၍အကျိတ်ပေါ်သို့အုံပေးကာ ပတ်တီးစည်းထားပါပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ဤဆေးနည်းေြ ပာပြပေးတဲ့ မောင်နန္ဒာ ( မန္တလေး )့ဲ ကို အထူးကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ်။ Credit : Original Uploder
၁။ ေသြးတိုး လို့ေသြးက် လိုလွ်င္ သံပုရာသီးတစ္လုံးကို ( ၁၅ ) မိနစ္ခန္ ့ျကာေအာ င္ေရစိမ္ျပီး အရည္ညွစ္၍ ျကက္ဥ တစ္လုံး ေဖာက္ထည့္ကာေ ရာေမႊေသာက္ လိုက္ပါ။ ေသြးက်ေဆး အထူး ေသာက္စရာမလိုဘဲ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။
၂။ အပူက်ိတ္ျဖစ္ရင္ ပါးခ်ိတ္ေအာက္ႏွင့္ ေပါင္ျကား တို ့တြင္ ေပါက္တက္ေသာ အပူက်ိတ္မ်ားကိုေပ်ာက္လိုလွ်င္ နႏြင္းခါးဥကို ေသြးလိမ္းပါ။ သုံးျကိမ္မွ် လူးရံု လိမ္းရံုႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။
၃။ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ဒန္ ့ကြ်ဲျမစ္ကိုျပဳတ္၍ သျကား အနည္းငယ္ထည့္ျပီးေသာက္ပါ။ တစ္ခါေသာက္လွ်င္ အျကမ္းပန္းကန္ႏွင့္တစ္လုံးေသာက္ ည ၊ နံနက္ ေသာက္ပါ။ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းေဝဒနာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစမည္။
၄။ ပန္းေသပန္းညိွဳး ေရာဂါ ျဖစ္လွ်င္ ကေစာ့ပုပ္ျမစ္ကိုအေျခာက္လွန္း အမႈန္ ့ျပဳျပီး ပ်ားရည္ႏွင့္ေသာက္ပါ။ရက္မရွည္ဘဲ ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။
၅။ အမ်ိဳးသမီး မ်ား မီးယပ္ျဖဴဆင္းေရာဂါျဖစ္လွ်င္ အေဝရာရြက္ ကို မျကာခဏ သုပ္စာထို ့အျပင္ သိေႏၶာ ဆားတစ္ဆ ၊ လက္ပံပြင့္ေျခာက္မႈန္ ့ႏွစ္ဆတို ့ကို ေထာပတ္ႏွင့္ ေရာ၍ ကြမ္းသီးလုံးခန္ ့နံနက္ ၊ ည ခြဲျပီးစားပါ ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။
၈။ ေလထိုးေလေအာင့္ျဖစ္လွ်င္ ပုန္းညွက္ပ န္းပြင့္ေျခာက္ မ်ားကို ေရေႏြးတြင္ထည့္၍ လက္ဖက္ရည္ျကမ္း လုပ္ေသာက္ပါ ၊ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည္်
၉။ ေအာ့အန္ျခင္း ေဝဒနာျဖစ္လွ်င္ ေရွာက္ျမစ္ကိုေသြး၍ ပ်ားရည္ နွင့္ စားပါက သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။
၁၀။ ဆီးအိမ္ တြင္းမွာ ေက်ာက္တည္ျခင္းျဖစ္လွ်င္သမင္ခ်ိဳကိုေသြး၍ သံပုရာရည္ႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္းေသာက္ပါ။ သုံးခါပင္ မေသာက္ရဘဲသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။
၁၂။ စားမဝင္ အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္လွ်င္ ပ်ားရည္ စစ္စစ္ကို လက္ဖက္ရည္ ဇြန္းေလးနဲ ့တစ္ဇြန္းကိုညအိပ္ရာဝင္တိုင္း ေသာက္ေပးပါ။ ခံတြင္းေကာင္း၍စားဝင္အိပ္ေပ်ာ္ေစႏိုင္ပါသည္။
၁၆။ ဆံပင္ကြ်တ္ လွ်င္ ပိေထာက္ရြက္ ကို ထုေထာင္း၍ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ႏွင့္ တြဲဖက္ ေလွ်ာ္ေပးပါ။ဆံပင္မ်ားလုံးဝမကြ်တ္ေစပါ။
ဤေဆးနည္းေျ ပာျပေပးတ့ဲ့ ေမာင္နႏၵာ ( မႏၲေလး )့ဲ ကို အထူးေက်းဇူးတင္ ရွိပါတယ္။ Credit : Original Uploder
Previous post အိမ်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ LCD /LED TV များ အချိန်မတိုင်ခင် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပြီး သက်တမ်းပြည့် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်နည်းလမ်း ကောင်းများ
Next post ဆရာဝန်တွေကို မျက်လုံးပြူးသွားစေတဲ့ အကြွေ(၂၆၃)စေ့နဲ့ သံတိုသံစတွေေ ဗိုက်ထဲကနေ ထွက်လာတဲ့ အသက်(၃၅)နှ စ်အရွယ်လူနာ